နှစ် ၂၀၀-ကျော်မှ သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန် ဖျက်သိမ်းမည့်အပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The interview on the issue of the order to denude 200-year-old historic Lin Zin Gone Muslim Cemetery
အခုဗုံးထောင် ဗုံးကွဲ က အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးကိုအာရုံလွှဲတာလေ »
This entry was posted on October 17, 2013 at 9:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “နှစ် ၂၀၀-ကျော်မှ သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန် ဖျက်သိမ်းမည့်အပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်”
October 17, 2013 at 10:50 am | Reply